माया ! (लघुकथा) - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ६ पुष २०७७, सोमबार १२:०० मा प्रकाशित
मुना र मदन एकआपसमा अँगालो मारेर कुरा गरिरहेका थिए । त्यही बेला अकस्मात भूकम्प गयो ।
मुनाले मदनलाई झन् बेसरी समात्यो । घर हल्लिरहेको थियो । कर्याककुरुक आवाज आउन थाल्यो । मदनले बल गरेर मुनाको अँगाले छुट्ट्यायो र दौडिएर घरबाट वाहिर निस्कियो । भर्खर उपचार गरेर फर्केकी मुना निकै अत्तालिइन् । सँगैको खाटमा छोरी निदाइरहेकी थिइन् । छोरीलाई च्यापेर बाहिर निस्कन खोजिन् ।
‘आमाले बच्चालाई घोप्टो परेर जोगाएको रहेछ तर आफू भने बाँच्न सकिनन्, बिचरा ǃ आमा भनेको माया नै हुँदोरहेछ ।’
मदनले बाहिर पुगेपछि श्रीमती र छोरीलाई सम्झियो । त्यही बेला ठूलो आवाज गरेर घर भत्कियो । मुना चिच्याएको र छोरी रोएको आवाज एकै पटिक सुनियो । मदन दौडेर भित्र जान खोज्यो तर अरुले समातेर जान दिएन ।
केही बेरमा उद्धार टोली आइपुग्यो । बच्चा रोइरहेको आवाज आइरहेको ठाउँमा गएर छोरीलाई जीवितै उद्धार गर्यो । एम्बुलेन्समा राख्दै उसले भन्यो — ‘आमाले बच्चालाई घोप्टो परेर जोगाएको रहेछ तर आफू भने बाँच्न सकिनन्, बिचरा ǃ आमा भनेको माया नै हुँदोरहेछ ।’
“के कुरा गरेको त्यस्तो ? म मरेर पनि तिमीलाई बचाइराख्छु । यमराज कहाँबाट पनि खोसेर ल्याउँछु ।”
उद्धारकको कुरा सुनेपछि मदनले आँखा बन्द गर्यो । उसको कानमा गुन्जियो– “साँच्चै, म मरे भनेंँ तिमी अर्की ल्याउँछौ ?”
अस्पतालमा भर्ना भएपछि मुनाले भनेको आवाज फेरि कानमा गुन्जियो । मदन बेहोस भएर ढल्यो । होसमा आँउदा ऊ त्यही अस्पतालमा थियो जहाँ मुनाको लास राखिएको थियो । ऊ जुरुक्क उठ्यो र सरासर बाहिर निस्कियो ।
पसलमा भ्यालेन्टाइन डेको गुलाफ किन्नेहरुको भीड लागिरहेको थियो ।
झम्सिखेल, ललितपुर ।